Chautari Daily » काेराेनाका कारण ज्यान गुमाउनेकाे संख्या १ लाख १४ हजार नाघ्याे (हेर्नुहोस् कुन देशमा कति ?)
काेराेनाका कारण ज्यान गुमाउनेकाे संख्या १ लाख १४ हजार नाघ्याे (हेर्नुहोस् कुन देशमा कति ?)
काठमाडाैं, १ बैशाख / विश्वमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या एक लाख १४ हजार नाघेकाे छ । विभिन्न तथ्याङ्क निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार साेमबार बिहानसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख १४ हजार २०८ पुगेकाे छ ।
संक्रमण हुनेकाे संख्या भने १८ लाख ५२ हजार ६५२ पुगेकाे छ । सङ्क्रमितमध्ये ४ लाख २३ हजार ४०० जना भने उपचारपछि घर फर्किएका छन् । अहिले १३ लाख १५ हजार ४४ मा कोरोना भाइरस सक्रिय देखिएको छ । तीमध्ये ५० हजार ७५८ जनाकाे अवस्था भने गम्भीर रहेकाे छ ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भए तापनि कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा अमेरिका, इटाली, स्पेन त्यसपछि फ्रान्स पर्छ । वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार अमेरिकामा २२ हजार बढीले काेराेनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १५ सय बढीकाे मृत्यु भएको छ भने २८ हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । अहिलेसम्म त्यहाँ ५ लाख ६० हजार ४२५ पुगेको छ । तीमध्ये ३२ हजार ६३४ जना भने निकाे भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ५ लाख ५ हजारभन्द बढीमा कोरोनाको सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये ११ हजार बढीकाे अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
अमेरिकापछि काेराेनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने देशमा इटाली पर्छ । अहिलेसम्म इटालीमा काेराेनाका कारण १९ हजार ८९९ जनाकाे मृत्यु भइसकेकाे छ । अहिलेसम्म त्यहाँ १ लाख ५६ हजारभन्दा बढीमा काेराेनाकाे संक्रमण भएकाे छ । आइतबार मात्रै इटालीमा ४ हजार बढी नयाँ काेराेना संक्रमित भेटिएका छन् भने ४३१ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ ।
काेराेनाले भयवह पारेकाे अर्काे देश हाे स्पेन । स्पेनमा अहिलेसम्म काेराेनाका कारण १७ हजार २ सयभन्दा बढीकाे ज्यान गइसकेको छ भने १ लाख ६६ हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै स्पेनमा ६०३ जनाको ज्यान गुमाएका छन् भने ३ हजार ८ सय थप नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् ।
संक्रमितमध्ये ६२ हजार बढी भने पूर्णरूपमा निकाे भएका छन् । अहिले स्पनेमा ८७ हजार २३१ जनामा काेराेना सक्रिय रहेकाे वर्ल्डे मिटर्सले जनाएकाे छ । तीमध्ये ७ हजार ३७१ जनाकाे अवस्था भने गम्भीर रहेकाे छ ।
काेराेना संक्रमण हुने देशमा चीनभन्दा अगाडि जर्मनी र फ्रान्स पनि रहेकाे छ । फ्रान्समा अहिलेसम्म काेराेना संक्रमितकाे १ लाख ३२ हजार ५९१ पुगेकाे छ भने मृत्यु हुनेकाे संख्या १४ हजार ३९३ पुगेकेा छ । आइतबार मात्रै त्यहाँ ५६१ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । संक्रिमतमध्ये २७ हजार १८६ जना भने पूर्णरूपमा निकाे भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ९१ हजारमा काेराेना संक्रिय रहेकाे छ । तीमध्ये ७ हजारकाे अवस्था भने गम्भीर रहेकाे छ ।
जर्मनीमा अहिलेसम्म काेराेना संक्रमित हुनेकाे संख्या १ लाख २७ हजार ८५४ पुगेकाे छ । तीमध्ये ६० हजार ३ सय भने पूर्णरूपमा निकाे भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ६४ हजार ५३२ जनामा काेराेना सक्रिय रहेकाे छ । करिब ५ हजार जना भने गम्भीर अवस्थामा रहेका छन् । अहिलेसम्म त्यहाँ ३ हजार २२ जनाले काेराेनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
काेराेनाकाे उद्गम स्थल चीन भने अहिले ११ सयकाे हाराहारीमा मात्रै काेराेना सक्रिय रहेकाे छ । त्यहाँ ७७ हजार ६६३ बढी पूर्णरूपमा निकाे भइसकेका छन् । चीनमा अहिलेसम्म कुल ८२ हजार १६० जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएकाे छ ।
प्रकाशित मिति १ बैशाख २०७७, सोमबार ०२:३६